Pakistana: Blog-o-mobile · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2018 12:10 GMT
Miala tsiny noho ny tsy namoahako lahatsoratra efa ho dimy ambin'ny folo andro izay, fa misy antony tsara amin'ny maha-MIA ahy aho. Tena lasa mandreraka be ny fivezivezena ao amin'ny làlan'ny aterineto ka nanimba sy namono ny skotera Vespa natokisako mihitsy aza izany. Natakaloko posiposy-bisikileta Pakistaney iray somary tsaratsara kokoa (fiarakaretsaka kodiaran-telo) izany, jereo ny sary eo ambony. Mahatalanjona eh? Mamily mamakivaky ireo elakelan-trano tery ao amin'ny tontolon'ny aterineto ilay izy. Misy seza manipy ihany koa ao anatiny, fa amin'ity karazany iray ity (tsy toy ny Aston Martin an'i James Bond), ny sezan'ny mpamily indray no atsipy. Mahamora zavatra izany rehefa tafahitsoka anatin'ny fitohanana proxy ianao; afaka manipy ny tenanao hiala ao anatin'izany zavatra mampijaly izany ary manao hara-kiri an'aterineto ianao.
Omena anao miaraka amin'ny rafitra balaafomanga azo tarihana ihany koa ity bisikileta kodiaran-telo ambony kalitao ity, izay ilaina ihany rehefa te-hamafa ireny dokambarotra manelingelina izay mipoitra amin'ny tranonkala sy blaogy an'aterineto ireny ianao.
Amin'ny angona rohy matsiron'ity herinandro ity izay maneho ny fomba fijery Pakistaney izao. Manasongadina zava-misy mampihoron-kodittra izay iainan'ireo ankizy Palestiniàna i Suspect Paki; Manambara ny fanombohana ny Desicritics.org i Teeth Maestro; Maneho hevitra mikasika ilay Fetiben'ny Sarimihetsika Kara(chi) i Windmill; Miaboabo fiteny mikasika ny fasisma i Fountainhead; Midera ireo Mpitondra entana any an-tendrombohitra ao Pakistana i Lightwithin; Miady hevitra mikasika ny fifotoran'ny lojika i Crow's Nest, ary farany, manolotra ireo eritreritro kisendrasendra tamin'ity andro ity aho.
Tsaratsara ho ahy ny mandeha satria mbola tsy maintsy haka ireo takelaka fahazoandalàko ho an'ny posiposy-bisikiletako aho. Milaza tsotra fotsiny hoe ”BLAOGEO ITY!”